Baro Sida Loo Soo Jiito Xaaskaaga
Soo jiidashada xaaskaaga ma ahan wax adag, xaaskaaga kuguma xireyso inaad wax weyn usameyso si aad qalbigeeda u hanato. Waad guursatay laakin ma taqaanid waxa ay xaaskaaga jeceshahay. Waxba haka welwelin. Soo jiidashada xaaskaaga ma ahan sida cilmiga beeraha, waa wax fudud. Markaad xaaskaaga tiraahdo erayo naxariis badan gaar ahaan erayada halkaan laguugu diyaariyay, waxaad arki doontaa iyadoo kugu waalaneyso. Qish, halkaan ka akhris erayo macaan oo muuqaal ah gaar ahaan eray
Baro Galmada Raga Ay Jecel Yihiin
Waxaad rabto inaad wax ka ogaato raaxada galmada gaar ahaan galmada raga ay jecel yihiin, Waxaad isweydiisay maxay jecel yihiin raga ka hor galmada? Jawaabta waa mid fudud: Raga waxa ay rabaan galmada ka hor galmo nuucaan waana galmo ay raga jecelyihiin. Raga markeey rabaan in ay la raaxeystaan xaasaskooda waxay ay jecel yihiin waxyaabo badan oo ku saabsan galmada. Waxay xaasaskooda ka rajeeyaan in ay u sameeyaan galmo holac ah. Raga ma jeclo oo kaliya in lala galmdoodo oo sa
Aniga iyo Cishqi: Sheeko jaceyl ah oo weliba aad umacaan
Aniga iyo cishqi, waa sheeko jaceyl ah oo dhex martay labo lamaane oo doonayo inay nolosha wadaagaan. Sheekadani waa sheeko dhex martay labo lamane kuwasoo isu qaaday cishqi jaceyl. Waxay jaclaadeen inay nolosha wadaagaan waana sababta ka dambeyso in ay guul ka gaaraan hadafkooda nolosha. Markuu cishqi ku galayo ma dareemeysid kaliya waxaa kuu muuqanayo qofka aad u qaaday jaceylka dhabta ah. Qish: Ku soo biir bogga Cishqi - Isha Arimaha Jaceylka oo aad kala socan karto shee
5 kamid ah calaamadaha gabadha aan ku rabin
Gabadha waan is naqaanaa, waxaan is dhaafsanaa erayo kaftann ah laakin ma fahmi karo halka ay ii wadato. Waa maxay calamadaha gabadha aan ku rabin? Miyeey i rabtaa mise xriir walaaltinimo, damac mise anaa Garowe ka heesayo? Sida aad ku ogaan karto gabadha aan ku rabin ma ahan wax adag! Haddii aad raacdo calaamadahaan.. 5 kamid ah calaamadaha gabadha aan ku rabin Aqoon ayaad u leedahay gabadhaan cajiibka ah, waxaad u aragtaa si joogto ama waxaad u qortaa Sms, Facebook, Whatsap
12 kamid ah calaamadaha gabadha ku jecel ama ku rabto
Waa maxay calaamadaha gabadha ku jecel? Jawaabta waa mid iska fudud, markaad tahay xidiga jaceylka waxaa kuu fudud garashada gabadha ku rabto. Dabcan gabadha ku jecel ama ku rabto waxay leedahay calaamado ka duwan gabdhaha kale waana qalbi qof ku jecel. Hadaba sidee lagu ogaadaa astaamaha gabadha ku jecel? Way ku soo eegeysaa, kaftankaagana way ku qoslaysaa, waxayna ku dhaqdhaqeysaa hareerahaaga si cabsi leh. Ma hubtid inay kula xodxodaneyso, inay saaxiibtinimo ka tahay, ama
Warqad jaceyl ah oo macaan
Warqad jaceyl ah waxaa qori karo qof walbaa laakin qof walbaa ma qori karo warqad jaceyl ah oo macaan, hadaba baro maanta erayo macaan oo shukaansi ah. Sida loo qoro dhambaal jaceyl macaan ah, hadaan si kale u iraahdo fariimo jaceyl oo macaan ah. Kawaran haddii warqad jaceyl ah oo macaan kaaga timaado lamaanahaaga adigoo filaneyn? Markaad akhrisanana warqadaasi ay ku qoran yihiin erayo macaan oo qalbigaaga soo jiidanayo. Waad ku farxi lahayd sow maahan? jawaabta macquulka: H
Qiso jaceyl oo xanuun badan kuwooda dareenka leh
Yaan jecleyn inuu akhristo qisooyin cajiib ah, gaar ahaan qiso jaceyl oo xanuun badan kuwooda dareenka leh misana ku saabsan nolosha? jawaabta: cidna. Tan iyo bilowgii taariikhda sheekada aadanaha, bani aadamku waxay ku raaxaysanayeen akhrinta qisooyinka ama sheekooyinka jacaylka ee taariikhda faca weyn leh. Sida Romeo iyo Juliet ilaa Helen of Troy, Qeys iyo Leyla, Cantar iyo Ceebla, Cilmi Boodhari iyo Hodan. Xitaa haddii ay tahay qiso jaceyl oo xanuun ah misana naxdin leh.
Sidaan ayaad ku dhisi kartaa kalsoonida naftaada
Qaabka dhisida kalsoonida nafta, sida aad u dhisi karto kalsoonida naftaada, raac tilmaamahaan si aad u noqoto qof isku kalsoon, dadkana ay ixtiraamaan. Maanta waxaan rabnaa inaan kula wadaagno sida aad u dhisi karto kalsoonida naftaada. Haddii aad raacdo tilmaamahani waxaan hubaa maanta wixii ka dambeeyo inaad ku kalsoonaan doonto naftaada. Sidaan ayaad ku dhisi kartaa kalsoonida naftaada Ma is ogtahay qofka aad tahay? Ma isweydiisay weligaa yaan ahay, markaad aragto qof hoo
Jaceylka dhabta ah waxaa lau gartaa calaamadahaan
Baro Calaamadaha jaceylka dhabta ah, Sida aad ku garan karto dareenka jaceylka dhabta ah iyo waxa uu kaga duwan yahay jaceylka dhalanteedka ah. Dareenka Jacaylka dhabta ah waa macaan, markaad heysato qof si dhab ah kuu jecel, adiguna aad u jeceshahay. Jaceylka dhabta ah ma dareemi karo qof walbaa ee waxaa dareemi karo macaankiisa iyo qaraarkiisa qofkuu haleelo. Jaceylka dhabta ah waxaa lau gartaa calaamadahaan Qof walbaa inuu fahmo dareenka jaceylka dhabta ah wey adag tahay.
Fariimo jaceyl oo xul ah qeybtii 7-aad
La soco Fariimo jaceyl oo xul ah qeybtii 7-aad, warqadaha jaceylka tan iyo waagii hore ayaa waxay ahaayeen kuwa loogu jecel oo la isu diro. Waagii hore waxay dadka isu diri jireen fariimo jaceyl oo xul ah weliba kuwooda warqadaha ah. Maanta jaceylku waa ka duwan yahay sidii shalay iyo sida la isugu diro fariimo jaceyl inkastoo weli ay jireen dad isu diro warqado jaceyl ah oo romantic ah. Fariintani waxaad ku diri kartaa warqad ahaan iyo sms labaduba. Waxayse ku qurux badan ta
Shukaansi wiil iyo gabar: Hanad iyo Leylo
Qormadeena maanta waxay ku saabsan tahay shukaansi qoraal ah, shukaansi wiil iyo gabar ku dhex maray caasimada Somalia ee Muqdisho. Shukaansi markuu dhagaheena ku soo dhaco isla markiiba waxaan dhegta u taageynaa wiil iyo gabar isa shukaansaday, haasaawe dhex maray. Waxaan isweydiineynaa su,aalo fara badan oo ay kamid yihiin. Shukaansi nuucee ah ayaa dhex maray? Qaabkee ayeey isku shukaansadeen? Jaceyl nuucee ah ayaa dhex maray? Sheekadoodu halkee ayeey ku soo gabagabowday iy
Raali galinta raga - Baro sida loo raali galiyo gacaliyahaaga
Raali galinta raga, baro sida loo raali galiyo ninkaaga, lamaanahaaga, gacaliyahaaga, jaceylkaaga, ugu sheeg qalaadkaaga erayo jaceyl oo raali galin ah. Markuu lamaanahaaga kugu weynyahay, waxaa muhiim ah inaad raai galiso, weliba u dirto erayo qalbigiisa farxadgelinayo. Markaad ku tiraahdo iga raali noqo gacaliye, kuma filno jaceylkaaga. Sabab? Sababtoo ah waa erayo raqiis ah, oo qof walbaa la iska dheho. Raga intooda badani waxay dareemaan inaysan dhab kaa ahayn xitaa haddi
Fariimo jaceyl oo xul ah qeybtii 6-aad
Fariimo jaceyl oo xul ah qeybtii 6-aad, Baro sida loo soo jiito lamaanahaaga qaab dabacsan iyo wixii ka sii sareeyo. Anagoo tixgalineyno codsiyada inooga imaanayo akhristayaasheena, waxaan si joogto ah idin kugu soo bandhigi doonaa fariimo jaceyl oo xul ah kuwaasoo ay isu diri karaan lamaaha is jecel. Gacanta kuuma soo gelin karno qofka aad jeceshahay balse waxaan kaa saacidi karnaa fariimo jaceyl oo xul ah kuwaasoo aad ku furi karto albaab walbaa oo kaa xiran. Jaceylku dhadh
Fariimo jaceyl oo xul ah qeybtii 5-aad
Akhriso Fariimo jaceyl oo xul ah qeybtii 5-aad, haddii ay ku adag tahay sida loo qoro fariimo jaceyl oo gaaban wax dhib ah malahan, sabab? Sababtoo ah anagaa xil iska saarnay inaan kuu soo diyaarino misana kula wadaagno si free ah. Kulama wadaagi doono fariimo jaceyl oo kaliya ee waxaan kaa saaci doonaa wax walbaa oo aad jeclaan lahayd. Haddii ay ahaan lahayd erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh iyo su,aalo kale oo aad qabto. Sida aan ognahay inaan soo jiidano raga ma ahan wa
Fariimo jaceyl oo xul ah qeybtii 4-aad
Ka bogo Fariimo jaceyl oo xul ah qeybtii 4-aad, sida aad uga barateen erayojaceyl.com erayo jaceyl oo macaan iyo geeraaro xul ah. Maanta waxay idinla wadaagayaan fariimo jaceyl oo xul ah kuwoodii ugu dambeeyay. Inaad u dirto lamaanahaaga fariimo jaceyl waa lagama maarmaan. Sabab? sababtoo ah ma jiraan wax ka farxad badan markaad aragto fariin kaaga timid lamaanahaaga aad sida dhabta ah u jeceshahay. Hadaan idin xasuusino waxaan horay kaga soo hadalnay fariimo jaceyl oo xul ah
Fariimo jaceyl oo xul ah qeybtii 3-aad
Ku soo dhawoow fariimo jaceyl oo xul ah qeybtii 3-aad, fariimahani waa fariimo dareen jaceyl leh oo ay isu diri karaan lamaanaha sida dhabta ah isu jecel. Qaasatan kuwa doonayo inay nolosha isla qaataan inta noloshooda ka dhiman. Noloshu waa mid qurux badan markaad heysato qof si dhab ah kuu jecel. Sida aan idin kaga balan qaadnay waxaa taxane inoo ahaan doono fariimo jaceyl oo xul ah qaasatan kuwa ugu cajiibsan oo aaminsannahay inaad ka heli doontaan. Waxaan fariintani farii
Fariimo Jaceyl oo xul ah qeybtii 2-aad
Ka bogo fariimo jaceyl oo xull ah qeybtii 2-aad, weliba fariimo ay isu diri karaan lamaane kala fog. Fariintani waxay xambaarsan tahay murti iyo jaceyl. Waxaan ugu talo galnay lamaanaha is jecel misana kala fog. Fariintani waxay si qaas ah u khuseysaaa xaasaska nimankooda ka fog. Sidoo kale qasab ma ahan in ninkaaga uu kaa fog yahay ee sidoo kale waxaad u diri kartaa goor walbaa oo aad u xiistay. Inaad u dirto ninkaaga fariimo jaceyl dhab ah kuma farxi doono oo kaliya ee waxa
Fariimo jaceyl oo xul ah qeybtii 1-aad
Baro sida loo qoro Fariimo jaceyl oo xul ah qeybtii 1-aad, geeraaro jaceyl oo cajiib ah iyo erayo jaceyl oo macaan. Maanta waxaan idin kugu talo galnay Fariimo jaceyl oo xul ah qeybtii 1-aad. Sida aad inooga barateen waxaan jecelnahay farxad gelinta akhristayaasheena. Waana sababta aan idinkugu soo diyaarino Fariimo jaceyl oo xul ah, geeraaro jaceyl oo cajiib iyo erayo jaceyl oo amaan ah. Inaan farxadgelino dhalinta cusub ma ahan oo kaliya hadafkeena ee waa guusheena. Fariimo
Sheeko galmo ah oo qoraal ah
Sheekadani waa sheeko galmo ah qaasatan sheeko qoraal ah. Waxay ku saabsan tahay nin iyo naag isqabo misana rabo inay jimceystaan. Haddii aan nahay Soomaali markaan ka hadleyno galmo waxaan u aragnaa ceeb ma isticmaalno erayga galmo ama wasmo aee waxaan isticmaalnaa erayo kale oo sarbeeb ah. Maxaa diiday isticmaalka erayga galmo? Sababtoo ah waxuu inala yahay eray ceeb ah. Sidaa darteed Soomaalida inta badan erayga galmo inay dhahaan waxay ka jecelyihiin erayo kale oo sarbeeb
Qiso jaceyl oo gaaban qeybtii 2-aad
Kulanti wacan oo wanaagsan akhirstayaal markaanna ku soo dhawaada qiso jaceyl oo gaaban qeybtii 2-aad, hadaba waa qiso nuucee ah? Qisadani waa qiso jaceyl oo taxane ah oo aad kala socon doonto bogga mucaashqiinta ee erayojaceyl.com. Waxaan horay uga soo hadalnay qeybtii koobaad. Hadaba maanta waxaan soo qaadaneynaa qeybtii labaad. Sida aan horay idin kaga balan qaadnay waxaan si joogto ah u wadi doonaa qisooyinka ku saabsan arimaha jaceylka iyo nolosha. Qiso jaceyl oo gaaban